Somaliland oo madaxweyne Xasan Sheekh kala hadleysa digniin loo diray shirkad Shiineys ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somaliland oo madaxweyne Xasan Sheekh kala hadleysa digniin loo diray shirkad Shiineys ah
Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa Sheegay inay dowladda Soomaaliya kala hadlayaan digniin dhawaan ka soo baxday ee ku saabsan shirkadda China laga leeyahay ee macdanta ka qodaysa Gobolka Awdal.
Wasiirka ayaa tilmaamay in aaney Somaliland u joojin doonin dhawaaq kasoo yeeray dowladda Soomaaliya shaqada shirkadda ARC ee Shiineyska ah, islamarkaana ay Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud kala xaajoon doonaan arrintaasi.
“Arrinta Macdanta, Maalintii dhaweyd 6-dii qodob ee uu Markhraatiga ka ahaa Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ee ay kala saxeexdeen Madaxweyneheena iyo Madaxweynaha Soomaaliya oo aanu muhiim u arkaynay waxaa ka mid ahaa inaan la carqaladayn oo aan la dhex galin arrimaha ku saabsan Horumarka iyo dhaqaalaha” ayuu yiri Wasiir Maxamed Biixi Yoonis oo Xafiiskiisa Saxaafadda kula hadlay.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri “Arrintaas uu ka hadlay Ninka agaasimaha ah ama warkaas ka soo baxayna wax ka jiraa ma jiro, cid maanta ka joojin karta Somaliland inay dhaqaalaheeda, horumarkeeda iyo macdanteeda la soo baxdaana ma jirto, cid ku soo duulaysaana ma jirto Macdanteedana way wadanaysaa”
Maxamed Biixi Yoonis ayaa intaasi raaciyay inay Soomaaliya ka wada hadlayaan bayaanka ka soo baxay “Wada hadaladu way inoo soconayaan, waanu la xidhiidhi Insha Allah Madaxweynaha laakiin, Somaliland marnaba aqbali mayso Khayraadkeeda, Nimcadeeda iyo Horumarkeeda inay cidi ka taliso, taladeeduna waa mid iyada u taala”
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan digniin u jeedisay shirkadda ARC oo laga leeyahay dalka Shiinaha, iyadoo lagu eedeeyey iney si sharci darro ah ugu howlantahay shidaal iyo macdan baaris aan sharci aheyn.
Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay shirkadaas Shiineyska ah iney xasarad ka abuurtay gobolka Awdal, iyadoo adeegsaneynsa maleeshiyo hubeysan.